Fetsy efatra hivarotana ny findainao Android amin'ny Wallapop | Androidsis
Wallapop dia nanjary iray amin'ireo fampiharana malaza indrindra amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izany dia azonao atao ny mividy sy mivarotra karazana vokatra rehetra misy eo amin'ny mpampiasa. Ny iray amin'ireo vokatra lafo indrindra amin'ity rindrambaiko ity dia ny telefaona finday. Mety mieritreritra ny hivarotra ny telefaona Android amin'ny fotoana iray amin'ity fampiharana malaza ity koa ianao.
Raha izany dia mamela anao torohevitra vitsivitsy izahay. Misaotra azy ireo, ny fizotry ny fivarotana ny findainao Android amin'ny Wallapop ho mora kokoa izany. Ho fanampin'izay, azo inoana fa amin'ity fomba ity no hivarotanao azy mialoha sy hahazoanao vola. Na dia, alohan'ny hamarotana azy aza dia tsara ny mitadidy zavatra vitsivitsy tokony hataonao amin'ilay fitaovana.
1 Sary sy famaritana ny vokatra
2 Box, charger ary kojakoja
3 Mamaly amin'ny chat
Sary sy famaritana ny vokatra
Raha te hahomby amin'ny fivarotana ny telefaona resahina isika dia mila mampiavaka ny doka ataontsika. Noho izany dia zava-dehibe tokoa ny hikarakarantsika ireo lafiny ireo rehefa mampakatra azy ireo ao anaty app. Ny sary amin'ny telefaona dia tokony ho tsara. Tokony ho hitanao tsara ny findainao Android, ankoatry ny fahafahanao mankasitraka ny satan'izy ireo ao aminy. Ny sary tsara dia afaka manampy betsaka ho an'ny mpampiasa hafa ao amin'ny Wallapop hividy azy.
Amin'ny lafiny iray, ary koa ny famaritana ny vokatra dia lafiny iray lehibe izay tsy maintsy karakarainay. Raha ny lojika, miankina amin'ny telefaona na ny fampiasana azy dia tsy hitovy ny fampahalalana. Saingy ny mpividy mety ho liana dia te hahalala bebe kokoa momba ny famaritana ny maodelinao, ny fanjakana misy azy, ny hafiriana nampiasanao azy, sns.
Amin'izany, rehefa misy mamaky azy, tsy hanana fisalasalana firy ianao. Araka izany, hialana amin'ny famaliana fanontaniana tsy tapaka ao amin'ny chat Wallapop, izay mahasosotra indraindray. Arakaraky ny famaritana ny zava-drehetra no tsara kokoa dia ho tsara kokoa ho antsika izany.
Box, charger ary kojakoja
Telefaona faharoa izay mbola anananao ny boaty, charger tany am-boalohany sy ny kojakoja hitondra vola bebe kokoa aminao izany. Azo antoka fa lafiny iray tokony hodinihina ity raha toa ianao ka mivarotra ny telefaona. Satria hamela anao hangataka vidiny somary avo kokoa, tsy toy ny hoe tsy nanana ireo kojakoja hafa ireo ianao.
Ary koa, ho an'ny olona mitady telefaona ao amin'ny Wallapop, hahaliana kokoa izany raha ny finday Android tadiavinao dia efa miaraka amin'ireo kojakoja rehetra ireo. Satria amin'ity fomba ity, tsotra kokoa ny fizotry ny fividiananao, ankoatry ny fitehirizana ny fananana mividy azy rehetra misaraka, izay amin'ny tranga sasany dia lafo kokoa.
Mamaly amin'ny chat
Ny chat dia iray amin'ireo asa tena ilaina ao Wallapop. Io dia hahafahan'ny mpividy mety hifandray aminao, na amin'ny fanontaniana na amin'ny tolotra momba ilay fitaovana amidinao. Zava-dehibe ny fanananao fampandrenesana ho fampandrenesana, hahafantaranao rehefa misy olona mifandray aminao ao amin'ilay fampiharana. Ny fahafantarana izany dia zava-dehibe.
Matetika amin'ny tranga maro dia mety ny resaka ataon'izy ireo aminao ao amin'ny chat no manampy an'io olona io manapaha hevitra mividy ny telefaona Android resahina. Misy ny olona manome torohevitra hamaly haingana. Na dia tsara aza fa tsy handray roa andro hamaliana isika, dia tsy ilaina ny hametahana ny app mandritra ny andro miandry valiny. Fa ny fifandraisana tsara dia azo antoka fa zava-dehibe amin'ny Wallapop.
Ny fanomezana antoka amin'ny mpividy dia zava-dehibe. Matetika izy io no ampahany mifanohitra indrindra amin'ity fizotrany ity, satria amin'ny tranga maro dia manatanteraka lavitra ny fivarotana. Ka mety hiteraka fisalasalana amin'ny mpampiasa maro izany. Lafiny iray lehibe amin'izany Tsy tokony handefa ny telefaona Android mihitsy ianao mandra-pahazoanao ny fandoavam-bola.
Ho fanampin'izay, voalaza fa ny fandoavam-bola dia tsy maintsy atao amin'ny fomba tsy avela hofoanana ny fifanakalozana. Ny safidy tena ahazoana aina indrindra amin'ireo dia matetika PayPal. Satria haingana sy azo antoka izy io, ary azonao atao ny manamarina eo noho eo raha nahazo karama ianao. Rehefa nandoa ianao dia andramo alefa ny telefaona amin'ny fotoana fohy indrindra.
koa, manome antoka ny mpividy dia tsara. Ohatra, raha misy ny olana amin'ny telefaona dia azonao atao ny manome azy fanohanana na manome antoka ny fiverenana, raha tsy mandeha izy. Ireo dia fihetsika mety hiteraka laza tsara, indrindra raha mivarotra matetika ao amin'ny Wallapop ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Mamitaka hamidy ny findainao Android amin'ny Wallapop
Asus dia hanana tale jeneraly vaovao: handray ny paikadiny ny orinasa